အောင်ရင်ငြိမ်း | အပျင်းပြေ စကားလုံးများနှင့် ဆော့ကစားခြင်း……
အပျင်းပြေ စကားလုံးများနှင့် ဆော့ကစားခြင်း……
အပျင်းပြေ စကားလုံးများနှင့် ဆော့ကစားခြင်း
From Mrs Zahra Hami
Reminder: အဘ ဥက္ကာကိုကို invitedyou to join Facebook…
Reminder: ဥက္ကာ ကိုကို invited you to join Facebook…
ကျနော်နှင့်စည်းကမ်းများ & ငါသေခဲ့သော်
ရေးပြီးသမျှ Select Month February 2014 (1) December 2013 (1) July 2013 (1) June 2013 (2) May 2011 (5) March 2011 (5) February 2011 (8) October 2010 (4)
ခင်သစ်ပင် ရုပ်ရှင်မေတးကဗျာ အိပ်မက်မြူ သောင်းပြောင်း မြ၀တီ
တိုးနှောင်မိုး၊ အောင်ရင်ငြိမ်း၊ ၀ိုင်ချို
ဥ က္ကာ ကို ကို 0
Hein Zaw Htut wants to share photos and updates with you.
Hein Zaw Htut
View Hein Zaw’s Photos
Hein Zaw has invited you to Facebook. After you sign up, you’ll be able to stay connected with friends by sharing photos and videos, posting status updates, sending messages and more.
This message was sent to . If you don’t want to receive these emails from Facebook in the future or have your email address used for friend suggestions, please unsubscribe. Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303
I am Mrs Zahra Hami and I am married to Mr. Roshan Hami for 19 years withoutachild and my husband died in just four days of his illness. I am contacting you to let you know my desire to donate the sum of $3.5 million to charities in your country which I inherited from my late husband. Due to my illness (cancer) I have been confirmed to leave for just eight months by doctors, so it is my desire that this money is invested and distributed to charity organizations of your choice like orphanage homes, schools, Home for the homeless, Home for the elderly, hospital and many other things that will be to the benefit of the less privilege. I want you to send the following information so that I start processing the affidavit that will prove you the new beneficiary to the fund.
( 1 ) Your full name ….
(2) Address ….
(3) City and country ….
(4Age / Sex ……
(5) Occupation …….
Once I receive your reply confirming your acceptance of the work, I will give all relevant information and swear affidavit to authorize the bank release and transfer the money to you as my duly appointed representative. Please reply me with this email zahra1hami@yahoo.co.jp.
အဘ ဥက္ကာကိုကို wants to be your friend on Facebook. No matter how far away you are from friends and family, Facebook can help you stay connected.
Senior Reporter at 7Day News Journal · Sittway · Yangon, Burma
4,995 friends · 144 notes · 122 groups
nuco733gaye. If you don’t want to receive these emails from Facebook in the future or have your email address used for friend suggestions, please unsubscribe.
ဥက္ကာ ကိုကို wants to be your friend on Facebook. No matter how far away you are from friends and family, Facebook can help you stay connected.
4,992 friends · 144 notes · 119 groups
အဘ ဥက္ကာကိုကို wants to share photos and updates with you.
View အဘ’s Photos
အဘ has invited you to Facebook. After you sign up, you’ll be able to stay connected with friends by sharing photos and videos, posting status updates, sending messages and more.
This message was sent to at your request. Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303
ကျနော်ငယ်ငယ်တုန်းက ပင်လယ်စပ်နားအုန်းခြံကြီးထဲမှာ နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်က အဖေက တစ်မျိုးလုံးနှင့်အစေးမကပ်။ ခြံဝမှာ ““ဆွေမျိုးနဲ့ခွေးမလာရ””ဟူ၍ သစ်သားပြားပေါ် ထုံးဖြူသုတ်ရေးကပ်ထားသည်။ တစ်ရွာလုံးက ဆွေမျိုးတွေက မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး ကျနော်တို့ခြံနားကို ခြေဦးပင်မလှည့်။ လှည့်လာသူကိုလည်း အဖေက ဓားနှင့်တစ်ဖုံ၊ လေးခွနှင့်တစ်မျိုး မောင်းထုတ်လေ့ရှိသည်။ ဆွေမျိုးတွေက စာကပ်ထားသောကြောင့်မလာကြသော်လည်း ခွေးတွေကတော့ နေ့စဉ် အလာမပျက်ကြ။ အဖေရေးထားသည့်စာကိုလည်း ဂရုမစိုက်ကြ။ ကျနော့်မျက်နှာနှင့်ပင် ပုံမှန်အတိုင်း သည်းခံဝင်ထွက်နေကြမြဲဖြစ်သည်။
ကြီးလာတော့ ကျနော့်မျက်စိထဲမှာ စာတွေကိုတွေ့လာရသည်။ စာတွေဆိုတာက လမ်းဘေးမှာ၊ သစ်ပင်စည်မှာ၊ လမ်းဆုံလမ်းခွတွေမှာ၊ အဆောက်အဦရှေ့တွေမှာ ကပ်ထားသော ကြေငြာချက်လိုလို။ သတိပေးစာလိုလို စာများပင်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက စည်းကမ်းချက်ထုတ်ရတာ သိပ်သဘောကျကြသူတွေဖြစ်သည်။ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ စာတန်းလေးများလိုက်ကပ်ကြသည်။ သူတောင်းစားက ကပ်သည်။ လက်ဆော့သူကကပ်သည်။ အစိုးရက ကပ်သည်။သက်ဆိုင်ရာက ကပ်သည်။ အဲသလို လူပေါင်းစုံက စာပေါင်းစုံကို နေရာပေါင်းစုံမှာ လျှောက်ကပ်ထားကြတာ တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
နေရာတိုင်းမှာတွေ့ဖူးပါမည်။ ““ကွမ်းမစားရ၊ ဆေးလိပ်မသောက်ရ”” စသဖြင့်။ လိုက်နာသူကခပ်ရှားရှားပင်။ ကျနော်လည်းအလုံးစုံလိုက်နာသူမဟုတ်ပါ။ လူထဲကလူတစ်ယောက်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားထဲက မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက် ဖြစ်သည့်အတွက်ခပ်ပေါ့ပေါ့ပင်မလိုက်နာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကို သိမ်းကျုံးမဆိုလိုပါ။ စည်းကမ်းကိုတိကျစွာ လိုက်နာကြသူတွေအများကြီးရှိပါသည်။ ကျနော်ဆိုလိုတာက တချို့သော အများအပြားကိုဖြစ်သည်။ (ရှုပ်သွားသလိုပဲ)။
စည်းကမ်းများစွာ၊ စာရွက်ပေါင်းများစွာ လူမြင်ကွင်းရှေ့ထွက်ပေါ်လာရခြင်းမှာ စည်းကမ်းမဲ့သူတွေ များလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူရှိန်အောင်လက်ဆော့သူတွေများလာတာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ထိုစာများတွင် ရသလေးတွေလည်းပါနေတာကိုလည်း တွေ့မြင်ရသည်။ တချို့စာတွေက ဖတ်ပြီးပြုံးရသည်။ တချို့စာတွေက ရယ်မောရသည်။ တချို့က မခံချိမခံသာဖြစ်စေရသည်။ တချို့ကတော့ ဒေါသထွက်စရာဖြစ်ရသည်။ အဲဒီလိုလေးတွေပေါ့။
ကျနော်တို့မြို့ကလေးရဲ့ ခရိုင်ဆေးရုံဧည့်ဆောင်ထဲမှာ ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကိုတွေ့ဖူးသည်။““နိုင်ငံတော်၏ လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေကို တိကျစွာလိုက်နာပါ””ဟူ၍ဖြစ်၏။ အဲဒီအောက်က ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုထပ်လာသည်။ ““ဆေးလိပ်မသောက်ရ”” တဲ့။ အဲဒီတော့ ရုတ်တရက်ကြည့်ပါက နိုင်ငံတော်ရဲ့လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေဆိုတာ ဆေးလိပ်မသောက်စေခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဟု အတွေးပေါက်ရသည်။ တိကျစွာလိုက်နာသင့်သည်ဟု ခံယူပြီး အပြင်မှာပဲထွက်သောက်လိုက်သည်။
သစ်တောဝန်ကြီးဌာနက သစ်တောကြိုးဝိုင်းများတွင်ကပ်ထားသော ဆိုင်းဘုတ်ငယ်များကို မြင်ဖူးကြမည်။ ““သစ်တစ်ပင်ခုတ်၊ ထောင်သုံးနှစ်””တဲ့။ဂျာနယ်တစ်စောင်ထဲမှာ ပါခဲ့သောကာတွန်းတစ်ပုဒ်ကိုသတိရသွားသည်။ ကာတွန်းဆရာနာမည်တော့မေ့နေပြီ။ သူတင်ပြထားတာ သိပ်ထိမိသည်။““သစ်တစ်ပင်ခုတ်ထောင်သုံးနှစ်တဲ့… တစ်တောလုံးခုတ်တော့ သူဌေးဖြစ်ရော””ဟူ၍။ ကဲ… ဘယ်လောက်လှသလဲ။ သရော်မှုလေးထဲမှာ စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးပါလာသည်။
ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ရန်ကုန်မြို့ဟောင်းကြီးက ရုပ်ရှင်ရုံတွေထဲမှာတောင် ဇာတ်ကားမစတင်မီ ““နိုင်ငံတော်အလံအားအလေးပြုပါ””ဆိုသည့်စာတန်းပေါ်လာချိန်မှာနေရာကမထကြသူတွေ ဒုနဲ့ဒေး။ အရင်ကတော့ သိပ်မသိသာ။ ခုလို သုံးရောင်ခြယ်အလံသစ် ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ကာလနောက်ပိုင်းမှာတော့ ပိုဆိုးကရော။ တုတ်တုတ်ပင်မလှုပ်ကြ(တုတ်တုတ်ကမလှုပ်ဘူးဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာပါလိမ့်?)။ ““ဟင်.. စာထဲမှာသင်ရတဲ့အလံလည်းမဟုတ်ဘူး… အာဖရိကန်အလံကြီး””ဟု ၀ိုးတ၀ါးတားအကြည့်များဖြင့်ပင်ထိုင်ကြည့်နေကြလေ၏။
သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်ဖူးသည်။ အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရုပ်ရှင်ပြစဉ် နိုင်ငံတော်အလံအားအလေးမပြုဘဲ ထိုင်နေသူတစ်ဦးအား ထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်သောသတင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ဆီမှာတော့ အဲ့လိုမလုပ်။ ထောင်မဆံ့မှာစိုးလို့ဖြစ်မည်။ ကောင်းလေစွ။
““ဆေးလိပ်မသောက်ရ”” ဆိုသည့် ကားပေါ်ကစာတန်းအောက်မှာ ယာဉ်မောင်းသူတစ်ဖွာ၊ စပယ်ယာတစ်ဖွာဖြင့် ငြိမ့်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ဖူးကြမည်။““ကွမ်းတံတွေးမထွေးရ”” ဆိုသည့်ဆိုင်းဘုတ်ကလေးခမျာ ကွမ်းတံတွေးများဖြင့် ကြဲပက်ခံထားရသည်ကို တွေ့ဖူးကြမည်။““အမှိုက်မပစ်ရ”” ဆိုသည့် ဆိုင်းဘုတ်ကလေးယိုင်နဲ့နဲ့က အမှိုက်ပုံကြီးကြားမှ သနားစဖွယ်ထိုးထွက်နေသည်ကို မြင်ဖူးကြမည်။အကြောင်းပြချက်အရာမှာလည်း ကျနော်တို့နိုင်ငံသားတွေက မရိုးပေ။ မြန်မာစကားကလည်း ခပ်ရှုပ်ရှုပ်ဆိုတော့ သိပ်အဆင်ပြေနေကြသည်။အမှိုက်မပစ်ရ ဆိုသောကြောင့် မပစ်ကြ။ အသာအယာပင် စနစ်တကျစုပုံကြသည်။ ချစ်စရာ့ဓလေ့လေးတွေပေါ့လေ။
ဆူးလေမီးပွိုင့်မှာ ““လမ်းဖြတ်မကူးရ””ဆိုသည့်ဆိုင်းဘုတ်ကို ခပ်တည်တည်ခွကာ အတင်းဖြတ်ကူးနေကြသူတွေကို မော်တော်ပီကယ်မမလေးတွေ ခရာကိုတရွှီးရွှီးကုန်းမှုတ်ပြီး လိုက်လိုက်တားနေကြရရှာသည်။ဒါတောင် ““ဟင်..မမြင်ဘူးထင်တာ…. ဒီဟာမတွေ ဘယ်ချောင်ကချောင်းနေကြလဲမသိဘူး””ဟု ပွစိပွစိရေရွတ်တာခံကြရသေးသည်။တချို့မော်တော်ပီကယ်တွေကိုလည်းတွေ့ဖူးသည်။ သူတို့ကတော့ စာတန်းတွေ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို အယုံအကြည်မရှိသော သင်္ကေတ၀ါဒီတွေဖြစ်သည်။ ဘာစာတန်းမှမလို။ သတိပေးစရာလည်းမလို။ သူတို့ရှိနေသည့်နေရာနားမှာ ရေသန့်ဘူးတစ်လုံးကိုမြင်သာထင်သာရှိအောင် ချထောင်ထားသည်။ အဲဒါဆိုရင် လိုင်းကားသမားတွေနားလည်ပေတော့။ ရေသန့်ဘူးရှိတဲ့နေရာတည့်တည့်ကို ပိုက်ဆံခေါက်လေးပစ်ခဲ့ပေတော့။ ကိုကိုမော်တော်ပီကယ်လေးက လှည့်ပင်မကြည့်။ သူမသိသလိုနဲ့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်သည်။သူမွေးထားတဲ့တပည့်ချာတိတ်လေးတစ်ယောက်က ပြေးကောက်ပြီးစုထားရသည်။ အဲ့ဒီလို နားလည်မှုသင်္ကေတနဲ့ လုပ်ကြသည်။ ကောင်းလေစွ။
စက်တင်ဘာအရေးအခင်းတုန်းကတော့ ဆိုင်းဘုတ်နဲ့မပြော။ အော်လံနှင့်သတိပေးသည်။““ရှေ့ကို တစ်စင်တီမီတာလောက်ထပ်တိုးလာရင် ကျနော်တို့ပစ်ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျား””
““နောက်ထပ် တစ်စင်တီမီတာလေးပဲထပ်တိုးလာရင် ကျနော်တို့ပစ်ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျား””
အဲဒီတော့ဘာဖြစ်တုန်း။ ဒီလူတွေက အပြောသမားသက်သက်မဟုတ်တော့ ဆော်တာပေါ့။
““ဖွတ်ညောင့်.. ဖွတ်ညောင့်… ဒက်ဒက်..ပွေး..၀ဲ..ညှင်း.. ဒိုင်း…အုန်း”” စသဖြင့်။
အဲဒီတော့မှ လူတွေက စီးလာတဲ့ဖိနပ်တွေအသာချွတ်ပြီး–
““အေးလေ.. ဒို့က စစ်သားလေးတွေက ချစ်စရာလေးတွေဆိုပြီး အားပေးလိုက်ရတာ””
““ဟုတ်ပ ကောင်မရယ်… တွား…လူချိုး”” — ဆိုပြီး ဖနောင့်နဲ့တင်ပါးတစ်သားတည်းကျအောင် ပြေးကြလေသည်။
မင်္ဂလာဒုံ-မှော်ဘီဖက်သွားတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ အုတ်တံတိုင်းကြီးတွေကာရံထားသည်။ အဲ့ပေါ်မှာလည်း စည်းကမ်းချက်တွေရေးထားသည်။
““ဤနေရာအားကျုးကျော်ဝင်ရောက်လာပါက ပုဒ်မ၁၄၄အရ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်အရေးယူခြင်းခံရမည်””ဆိုလား။ အဲ့နားကိုတော့ လူမပြောနဲ့၊ ခွေးတွေတောင် —-
““ဟေ့.. ကိုအောင်နက်… အဲ့နားကိုမကပ်နဲ့နော်.. အထဲမှာ မုဆိုးတွေရှိတယ်။ သူတို့ကလက်ယားနေကြတာ..အာဝု””
““စိတ်ချ..ကိုဂုတ်ကျား… ကိုယ့်အန္တရာယ်ကိုယ်သိတယ်… ကိန်..ကိန်”” ဆိုပြီး ယောင်လို့ပင် မကပ်ကြ။ ကောင်းလေစွ။
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မီးသတ်ရုံးကြီးက အကြီးကြီး။ အသစ်ကြီး။ အထဲမှာရပ်ထားတဲ့ ကားအနီကြီးတွေကလည်း ခန့်ခန့်ကြီး။ ရုံးမျက်နှာစာမှာရေးထားတဲ့ စာတန်းကြီးကလည်း ထင်းထင်းကြီးနဲ့ရှင်းရှင်းကြီး။““မြန်မြန်သိ။ မြန်မြန်သွား။ မြန်မြန်သတ်”” တဲ့။ မျက်စိထဲမှာ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက နံပတ်တုတ်တွေတကားကားနဲ့ ဆန္ဒပြတဲ့လူအုပ်ကြီးကို လိုက်ရိုက်နေတာကို မြင်ယောင်သွားပြီး ခွိခနဲကြိတ်ရယ်မိသည်။
အဘွားကြီးတစ်ယောက် တုန်ချိချိဖြင့်ဝင်ရောက်တောင်းရမ်းသည်။ ဆိုင်ရှင်ကအော်ထုတ်သည်။
အဲ့ဒီလိုစာမဖတ်တတ်သူတွေက စည်းကမ်းချက်ကိုမသိ။ စာဖတ်တတ်သူတွေကလည်း တမင်မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ကြ၏။
““ဤနေရာတွင်သေးပေါက်ရန်မဟုတ်”” ဟုရေးထားသောစာတန်းအောက်မှာ တစ်ယောက်ကထပ်ဖြည့်ပေးထားသည်။ ““ညာဖက်နားမှာ သွားပေါက်ပါ”” ဟု။တချို့ကတော့ နင့်နင့်နဲနဲရေးသည်။ ““ဒီနေရာမှာ ခွေးများသာသေးပေါက်ရန်””ဟု။ စာတမ်းကထိရောက်သလားတော့မသိ။ ခွေးရောလူရော လစ်ရင်လစ်သလိုပေါက်ကြတာပါပဲ။ ကောင်းလေစွ။
ဟာသလေးတစ်ပုဒ်ကြားဖူး၏။ ပွဲခင်းထဲမှာဇာတ်ကနေသည်။ မူးနေသောလူနှစ်ယောက်က ဇာတ်ပွဲကြည့်ချင်ကြ၏။ သူတို့မှာ ပိုက်ဆံကမရှိ။ သို့နှင့် ဇာတ်ရုံဘေးကထရံကို အပေါက်လေးဖောက်ပြီးဝင်ကြသည်။ရိုးရိုးတိုးဝင်တာမဟုတ်။ လေးဖက်ထောက်ပြီး နောက်ပြန်ကြီး ဖင်နဲ့တိုးဝင်တာဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေးကဓာတ်မီးတ၀င်းဝင်းနဲ့ရောက်လာသည်။ သူတို့ကိုမြင်တော့ အလန့်တကြားတား၏။““ဟေ့လူတွေ…. ဒီအပေါက်ကထွက်လို့မရဘူး.. ပြန်ဝင်စမ်း.. ပြန်ဝင်စမ်း””ဆိုပြီး အတင်းထိုးထည့်လိုက်သည်။ သူတို့လည်း ဇာတ်ရုံထဲအေးဆေးလေးရောက်သွား၏။ ဥာဏ်ထက်ပုံများပြောပါတယ်။
သမိုင်းလမ်းဆုံက ဆိုင်ခန်းတစ်ခန်းမှာ စာချိတ်ဖူးသည်။ ““ဆိုင်ခန်းမငှားပါ””တဲ့။ မငှားရင်ရေးစရာလား။ ပြည်လမ်းပေါ်က ခြံကြီးတစ်ခြံရှေ့မှာ ဗီနိုင်းကြီးကပ်ထားသည်။ ““ခြံလုံးဝမရောင်းပါ””တဲ့။ မရောင်းရင်ရေးစရာလား။အဲ့လိုတွေပြန်မေးစရာရှိသည်။ သို့သော်လည်းသူတို့က သူတို့ဒုက္ခနှင့်သူတို့။ ပွဲစားတွေ။ မျက်စိကျသူတွေ၏ မေးခွန်းများကို ပြန်ပြန်ဖြေနေရတာ ကြာတော့စိတ်ပျက်လာပုံရသည်။ စာထုတ်ကပ်ထားတော့အေးရော။ ကောင်းလေစွ။
““ခုံပြည့်လျှင်လူပိုမတင်ပါ””ဆိုပြီး အထူးကားတွေက ပုရွက်ဆိတ်တောင် နေရာမရ။ ““လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ..တို့ရန်သူ””ဆိုသည့်စာတန်းအောက်မှာ ၀န်ထမ်းတွေ အိတ်ဖောင်းပြီးစိတ်ပြောင်းနေကြ။ ““မှုခင်းကင်းစင်ရက်သတ္တပတ်””ဆိုင်းဘုတ်တင်ပြီးပြီးချင်းရဲစ ခန်းမှာ အမှုတွေပြည့်နှက်လာ။ မိုးလေ၀သသတင်းကြေငြာချက်တွေယုံစားပြီး ပင်လယ်လုပ်သားတွေဒုက္ခတွေ့ကြ။ ဆေးလိပ်ဘူးခွံပေါ်က ၁၈နှစ်မပြည့်သူကိုမရောင်းရစာတန်းလေးကို ကျောင်းသားလေးတွေ မျက်ကွယ်ပြုထားကြ။ ““ရထားလက်မှတ်မှောင်ခိုရောင်းချသူကိုသတင်းပေးလျှင် ဆုငွေတစ်သိန်း””စာတန်းကြီးချိတ်ပြီး မီးရထားဝန်ထမ်းတွေကပဲ မှောင်ခိုမောင်တွေဖြစ်နေကြ။
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကလည်း ““clean Government””ဟု မိန့်ခွန်းထဲထည့်ပြောကြား။ ပြည်ပမီဒီယာတွေကလည်း ““အဲဒါ…အစိုးရကိုရှင်းလင်းပစ်ပါလို့ဆိုလိုတာ””ဟု ပြန်ချေပကြ။““တစ်ဖက်နိုင်ငံထက်သာလွန်သောနိုင်ငံအဖြစ်သို့””ဟု ထပ်ပြောပြန်။ ““ဖာနိုင်ငံ””ကိုပြေးမြင်ယောင်မိကြ။ မေလ၂ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ““မီဒီယာကော်နာ””ဆိုတဲ့ ဆိုင်တွေဖွင့်လှစ်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးနှင့် ရန်ကုန်ဝန်ကြီးချုပ်တက်ရောက်။ တချို့တွေကမီဒီယာကော်နာ ဆိုတာ မီဒီယာထောင့်ကန်ဘောဟု စဉ်းစားနေကြ။
စာတန်းတွေ၊ ကြေငြာချက်တွေ၊ စည်းကမ်းတွေ……။ ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ နေ့တဓူဝပလူပျံလာနေသည်။ လူမှုဘ၀ခရီးလမ်းမှာ စောင့်ထိန်းစရာတွေများလာနေသည်။ ဟိုဟာလုပ်ချင်လည်း မလွတ်လပ်။ ဒီဟာပြုချင်လည်းအဆင်မပြေ။ ကပ်ထားသောစာတန်းတွေကိုကြည့်ကြည့်ပြီး လူကခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ပုံဖြစ်ဖြစ်နေလာသည်။
ရန်ကုန်က နွယ်နီမဂ္ဂဇင်းတိုက်လှေကားမှာ ကပ်ထားတဲ့စာတန်းလေးကတော့ လှပသည်။ ဖတ်ရတာလည်းအဆင်ပြေသည်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အနေအထားရောက်အောင် ဖန်တီးနိုင်သည်ဟုထင်သည်။““ဒီနေ့ရာလေးမှာ ကျနော်တို့ အမှိုက်မပစ်ဘူး။ ကွမ်းတံထွေးမထွေးဘူးနော်”” တဲ့။ ရိုးရိုးလေး။ ကြားနေမြင်နေကျစည်းကမ်းတစ်ရပ်ကို သိမ်မွေ့စွာရေးသားထားသည်။
ရွှေပေါက်ကံမြို့သစ်ထဲက လမ်းခွဆုံကွမ်းယာဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဒီလိုလေးရေးထားသည်။““ဒီနေ့အကြွေးမရောင်းဘူး။ နက်ဖြန်မှရောင်းမယ်”” တဲ့။ သူပြောတာလည်း လှသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်သူကျေနပ်သည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရချမှတ်ကြေငြာထားသလိုပင်………..““စည်းကမ်းပြည့်ဝသော နိုင်ငံတော်သစ်”” ဆီသို့ ကျနော်တို့ ချီတက်နေကြပါသည်။ နေရာအနှံ့စည်းကမ်းချက်တွေ ပြည့်နှက်စွာဖြင့်ပေါ့။ ကောင်းလေစွ။ ။